Qaar kamid ah Wasiiradii hore oo diiday in ay Wareejiyaan Gaadiidka aan Xabadaha Karin | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Qaar kamid ah Wasiiradii hore oo diiday in ay Wareejiyaan Gaadiidka aan Xabadaha Karin
Warar lagu kalsoonaan karo oon helnay ayaa sheegaya in qaar kamid ah Golihii Wasiirada Xukuumadii Ra’izul Wasaare Cabdi Wali Sheekh Axmed, ay ka dhago adeegayaan in ay wareejiyaan gaadiidka aan xabadaha Karin iyo hubka ay heestaan.
Wasiiradan oo qaar badan oo kamid ah ay wareejiyeen Xilka Wasaaradihii ay hayeen ayaa hada heesta hanti ay Dowladu leedahay sida gawaarida aan xabadaha Karin ,hub iyo alaabo kale oo lagu wareejiyay markii ay kamid noqdeen Xukuumadii dhacday.
Sida aan Wararka ku heleyno Wasiirada qaarkood ayaa diidmadooda ku saleenaya in marka hore laga wada qaado Xubnihii kamidka ahaa Xukuumadii hore gaadiidka iyo hubka ay heestaan hadii ay taasi dhacdana iyana ay diyaar u yihiin in ay wareejiyaan hantida Dowlada.
Wasiiradii ku dhawaa Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyagu wali heesta gaadiidka aan xabadaha Karin iyo hub aad u badan, waxa ayna Wasiirada kale tuhmayaan in gaadiidka iyo hubka kaligood laga qaadayo loona dhaafayo xubnaha ku dhaw dhaw Madaxweyne Xasan Sheekh.
Magaalada Muqdisho waxaa hada ku sugan Xubno Xildhibaano iyo Siyaasiyiin horey uga soo mid noqday Xukuumadiihii hore, kuwaa oo wali heesta gaadiidka aan xabadaha Karin oo horey Dowladu u siisay iyo hub .
Wasiiradii xukuumadii R/Wasaare Cabdi Wali ayaa kaliya wareejiyay furaha xafiisyadii ay ku shaqeenayeen iyo sidoo kale dukumiintiyo, mana jiraan sida aan Warar ka ku heleyno wax kale oo muuqda ay wasiiradu wareejiyeensida lacago, Gaadiid iyo hub intaba.
Qaar kamid ah Wasiirada Cusub ee Xukuumada Ra’izul Wasaare Cumar Cabdirashiid ,ayaan heesan gaadiid ay ku socdaan, waxaana taa badalkeeda ay wataan gadaiid kiro ah iyo kuwa kale ay ka qaateen dad eheladooda ah .
Xafiisyada Hantidhoorka iyo Xeer ilaalinta ayaa horey u sheegay in ay jiri doonaan isla xisaabtan dhab ah ,lagana wareejin doono Wasiirada gaadiidka aan xabadaha Karin ,hub iyo hantida kale ee Dowladu leedahay.
Ma muuqato in hada Wasiiradii xilalka wareejiyay isla xisaabtan dhab ah mareyn, waxaana Warbaahinta laga soo deenayay maalmaahan Wasiiradii hore oo wareejinaya kaliya xilalkii ay hayeen, waxaana hanta dhoorka horey u sheegay inta badan Wasaaradaha in ay sameeyeen Wax isdaba marin iyo musuq maasuq.